(1) - BookCubicle
အပိုင်း - ၁ : ကောင်လေးတွေကြားရေပန်းစားတဲ့ ကောင်မလေး။
ဘယ်လိုကနေစလဲတော့ မသိပေမဲ့ ကျောင်းသားတွေကြားထဲမှာ ယွန်းဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်းက နာမည်ကြီးနေခဲ့တယ်။
"အာ... ငါ့ရဲ့နတ်ဘုရားမလေးက တကယ်ကို ချစ်စရာကောင်းနေတာပဲ..."
ဓာတ်ပုံထဲက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကတော့ လှလှပပပြုံးနေလို့ပေါ့။ ကောင်မလေးက ခုံလေးတစ်လုံးပေါ်မှာ ထိုင်နေပြီး ခေါင်းမှာပန်းလှလှလေးတစ်ပွင့်ပန်ထားတယ်။ ဆံပင်ညိုညိုကောင်ကောက်လေးတွေက လေမှာလွင့်နေခဲ့ပြီးတော့ သူမရဲ့ ခြေထောက်နားမှာ ခွေးလေးတစ်ကောင်က ခုန်နေခဲ့တယ်။
နောက်တစ်ပုံကို ထပ်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ခွေးလေးက ကောင်မလေးလက်ထဲကို ရောက်လာပြီးတော့ ကောင်မလေးက မျက်လုံးလေးတွေကို လခြမ်းလေးတွေလိုကွေးကွေးလေးဖြစ်လောက်တဲ့အထိ ရယ်နေတာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။
"ဟေ့ကောင်တွေ ငါ့ဖုန်းကို ပြန်ပေးစမ်း!"
အတန်းထဲကကောင်လေးတွေ အော်ဟစ်နေကြတာကို ကောင်မလေးတချို့ကတော့ မကြည်သလိုကြည့်ကြတယ်။ ဘာလို့ဒီကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် အကောင်စုတ်တွေက သဲသဲလှုပ်မှန်းသူတို့မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီကောင်စုတ်တွေ လုပ်ချင်တာလုပ်နေတာကို သူတို့လည်း ပြောမနေချင်တော့ဘူး။ ဘာလို့ဆို Photo Model တွေဆိုတာလည်း မှိုလိုပေါက်တဲ့ ခေတ်ကြီးပဲဟာ။ တစ်ချိန်ကျရင် ပျောက်သွားမှာပေါ့။
ကောင်လေးအချို့ငြင်းခုန်နေရင်းကနေ ဝင်လာသူကို တိုက်မိလာတာကြောင့် အနောက်ကိုပျာပျာသလဲ လှည့်ကြည့်တော့ တစ်ခေါင်းလုံး နီရဲနေပြီးနားမှာလည်း နားပေါက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်။ ရုတ်တရက် ကောင်လေးတွေအကုန်လုံး တိတ်သွားတော့တယ်။ တိုက်မိလိုက်တဲ့ကောင်လေးကတော့ ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေတောင် ကျချင်လာတယ်။ ဘာလို့ တစ်ကျောင်းလုံးရဲ့ အော့ကြောလန်၊ အခြားကျောင်းတွေကလည်း ကြောက်ရတဲ့ လူဆိုးကောင်ကို သူ ဝင်တိုက်လိုက်ရတာလဲ။ သူက အတော်ကံဆိုးတာပဲ။
"ခန့်... ဆော... ဆောရီး..."
မီးလိုရဲရဲတောက်နေတဲ့ ဆံပင်ထောင်တွေနဲ့ ကောင်လေးရဲ့ မျက်လုံးတွေက သူ့ကို ဝင်တိုက်တဲ့ ကောင်လေးရဲ့ လက်ထဲကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်ထားတဲ့ ဖုန်းကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုတ်ထားတာကြောင့် ဖုန်းကလင်းလာပြီး lock screen wallpaper မှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပုံလေးပုံလာတော့တယ်။ ကောင်မလေးတစ်ယောက် လက်လေးနှစ်ချောင်းထောင်ပြီး shoulder off အကျီ င်္၊ ပေါင်လည်လောက်ရှိတဲ့ ဘောင်းဘီလေးနဲ့ မျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်၊ မျက်လုံးမှိတ်တဲ့ဘက်က လက်ကို လက်နှစ်ချောင်းထောင်ထားတဲ့ ပုံလေးပေါ့။
ရဲရဲတောက်နေတဲ့ ဆံပင်ထောင်တွေနဲ့ကောင်လေးရဲ့ မျက်လုံးက မဆိုစလောက်လေး ပျော့သွားတာကိုတော့ ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ပါဘူး။ တဒင်္ဂလေး မျက်လုံးတွေက ချစ်ရိပ်တွေနဲ့ နူးညံ့သွားပြီး ချက်ချင်းကို မျက်ခုံးတွေ တွန့်ချိုးသွားတော့တယ်။ ရပ်ကြည့်နေတဲ့ အတန်းထဲက ကောင်လေးတွေကတော့ ရဲရဲတောင်အသက်မရှူရတော့ဘူး။ ကောင်မလေးတွေကတော့ ကောင်လေးတွေရဲ့ ကံဆိုးမှုကို ကြိတ်ရယ်နေခဲ့ကြတယ်။ ကောင်းတယ် ဘယ်သူက Photo Model တစ်ယောက်ကြောင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ မျောက်ငပိကိုင်ထားသလို ဖြစ်နေခိုင်းလို့လဲ။
တောင်းပန်တာကို တစ်ခွန်းမှမပြောဘဲ သူ ဆောင့်အောင့်ဝင်ချလာလိုက်တယ်။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ မကျေမလည်ဖြစ်နေသေးဆဲ။ တစ်တန်းလုံးကလည်း ခန့်ဝေသော်ရဲ့အရိပ်ကိုမြင်တာနဲ့ တိတ်ဆိတ်သွားကြတယ်။ မိန်းကလေးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့လုပ်နေကြအလုပ်တွေကို ဆက်လုပ်နေကြတာပေါ့။
ပြောစရာရှိလာတာက ခန့်ဝေသော်က ကျောင်းရဲ့ လူဆိုးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သူ့မှာ မီးတောက်တွေလို ဆံပင်နီနီတွေရှိတယ်။ မျက်လုံးတွေစူးစူးတွေရှိတယ်။ နောက်ပြီး သူက ကောင်ချောလေးတစ်ယောက်ပေါ့။ အများကြိုက်လောက်တဲ့ ကောင်လေးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်လေးတွေကို သဘောကျတဲ့ကောင်မလေးတွေဆိုရင်တော့ ခန့်ဝေသော်ကို အမှတ်ပြည့်ပေးလိမ့်မယ်။ ဒါကတော့ သေချာပေါက်ပြီး။ ထပ်ပြီး... ပြောရမှာကတော့ ခန့်ဝေသော်က ရုံးခန်းကို ဘယ်နှစ်ခါပဲဝင်ရဝင်ရ သူ့ဆံပင်အရောင်ကို ပြောင်းဖို့ဘယ်သူမှ ပြောလို့မရဘူး။ ကျောင်းအုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပေါ့။ သြော်... ပြောရဦးမယ်... ကျောင်းအုပ်ကြီးက သူ့ဦးလေးလေ။ ဒီတူလေးတစ်ယောက်ကို ကျောင်းအုပ်ကလည်း နိုင်ပုံမရပါဘူး။
ခန့်ဝေသော်ရဲ့မိဘတွေက အဝေးမှာနေကြပြီး သူတို့နဲ့ဝေးနေတဲ့သားလေးကို လိုလေးသေးမရှိထားတယ်။ ဦးလေးကျောင်းအုပ်ရဲ့မိန်းမကလည်း ကလေးမရနိုင်တာကြောင့် ခန့်ဝေသော်ကို တုန်နေအောင်ချစ်တယ်။ ဦးလေးက ဆူမယ်ဆိုရင်လည်း ခန့်ဝေသော်ရှေ့က ကာဆီးကာဆီးနဲ့။ ဒီတော့ ခန့်ဝေသော်ကို ပြောနိုင်တာက တလောကလုံးမှာ ဘုရားပဲ ရှိလိမ့်မယ်လို့တောင် ပြောလို့ရတယ်။ ဒါတောင် သေချာလှတယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ပြီး ခန့်ဝေသော်က လူပျိုဖော်ဝင်နေပြီမို့ သူ့ရဲ့ ကလန်ကဆန်လုပ်ချင်တဲ့စရိုက်ရယ်၊ ထစ်ခနဲရှိသွေးဆူလွယ်တာက အကျင့်ကြီးလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ရန်ပွဲဟေ့လို့ ပြောလိုက်ရင် ခန့်ဝေသော်နဲ့ ဘယ်သူနဲ့လဲလို့ပဲ ပြောလိုက်လို့ရတယ်။
ခန့်ဝေသော်ရဲ့ ရန်ဖြစ်တာတွေက အကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ပြန်ဘူး။ သူ လူဆိုးလေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကလည်း ခပ်များများတော့ ခပ်များများရယ်။
ဥပမာ သူ လမ်းလျှောက်လာမယ်။ ကလေးတွေက ကြောင်လေးတစ်ကောင်၊ ခွေးလေးတစ်ကောင်ကို အနိုင်ကျင့်ပြီး ဆော့နေကြမယ်။ အဲ့ဒါမျိုးဆို သူက ဖြဲခြောက်ပြီး ကြောင်လေး၊ခွေးလေးတွေကို ကာကွယ်မယ်။
ဟော... မိန်းကလေးတွေကို နှောင့်ယှက်တဲ့ သူတချို့နဲ့ကြုံလည်း ခန့်ဝေသော်က ဝင်ကူညီတတ်သေးတယ်။ အဲ ကံမကောင်းတာက သူ့ရဲ့ နီနီထောင်ထောင် ဆံပင်တွေရယ်၊ နားမှာ သုံးလေးကွင်းလောက်ရှိနေတဲ့ နားကွင်းတွေရယ်ကြောင့် ခွေးလေးကြောင်လေးတွေကလွဲရင် သူ ကယ်တဲ့လူတွေကတော့ သူ့ကို ကျေးဇူးတင်လေ့မရှိကြဘူး။
အဲ့လိုအကြောင်းအရာကနေ ပလိန်းကြီး သူ ကြည့်မရတာကြောင့်ဆိုပြီး ခန့်ဝေသော်က ထိုးကြိတ်ချင်ထိုးကြိတ်သေးတာ။ တစ်ခါဆို သူ မကြိုက်တဲ့အရောင်ဝတ်လာလို့ဆိုပြီး ခန့်ဝေသော်က ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ထိုးဖူးသေးတယ်။ ဒီလိုတွေကြောင့် ခန့်ဝေသော်က လူဆိုးလေးဆိုတဲ့ သတင်းက ပိုပိုမွှေးလာတယ်။
ကူညီတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ခန့်ဝေသော်ကို ကြည့်ရတာလည်း ဘယ်လိုမှ နေပုံမပေါ်ပါဘူး။ သူ ကူညီချင်လို့ ကူညီလိုက်တာပဲဟာ။ ကျေးဇူးတင်တယ် မတင်ဘူးဆိုတာကို သူ တွေးလည်း မနေပါဘူး။ မျက်စိရှေ့တွေ့လို့ ကူညီလိုက်တာ။ သူက ဘုရားမဟုတ်တာကြောင့် မျက်စိရှေ့မတွေ့တာတွေကို တွေးပူပြီး စိတ်လည်းဆင်းရဲမနေပါဘူး။ ဒီတော့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ကူညီတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စက သူ့ရှေ့မှာ ဖြစ်နေတာကြောင့်လို့ပဲ ပြောလို့ရတယ်။ လမ်းကြုံသူရဲကောင်းလေးလို့ သူ့ကို ကျွန်တော်တို့ ခေါ်ကြမလား?
ဒီလိုနဲ့ ခန့်ဝေသော်တစ်ယောက်က ခန့်မှန်းလို့မရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေအကုန်စုပြီး လူဆိုးဗိုလ်လေးဖြစ်လာတော့တာပေါ့။ ရန်ဖြစ်တော်တယ်၊ ကျောင်းအုပ်ဦးလေးရဲ့အရှိန်ရှိတယ်၊ ခက်ထန်တဲ့မျက်နှာပေးရှိတယ်။ နောက်ပြီး သူ့ကို လူတွေထင်ချင်သလိုထင် လူတိုင်းရဲ့ အထင်တွေကို လိုက်ဖြေရှင်းဖို့ မကြိုးစားဘူး။ ဒီတော့ သူ လူဆိုးဗိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်မှန်းမသိကိုဖြစ်လာတော့တယ်။
ရွယ်တူကျောင်းသားလေးတွေ အမြင်မှာတော့ ခန့်ဝေသော်က အရမ်းမိုက်တဲ့ကောင်ကလေး၊ ထိကိုမထိရဲတဲ့ ကောင်ကလေးဖြစ်ပြီး၊ သူ့ထက်အတန်းကြီးကျောင်းသားတွေ အမြင်မှာတော့ ခန့်ဝေသော်က နောက်ခံအားကိုးနဲ့ မိုက်နေတဲ့ မိုက်တိမိုက်ကန်းတဇွတ်ထိုးကောင်လေး၊ အတန်းငယ်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်တော့ အရမ်းမိုက်ပြီး ဆိုးဖို့ဆိုရင် Ideal ထားရမဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့။
ခန့်ဝေသော်ကတော့ သူ့ကိုဘယ်သူက ဘယ်လိုပဲ ထင်နေထင်နေ အဖက်မလုပ်ပါဘူး။ အရင်ကဆိုရင် နည်းနည်းတော့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းတော့ သူ စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်တော့ဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့... ခန့်ဝေသော်မှာ တိတ်တခိုးချစ်ရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ အဲ့ဒီကောင်မလေး အကြောင်းကိုပဲ အချိန်ပြည့်တွေးနေတတ်တယ်။ ဒီတော့ တခြားသူတွေရဲ့ထင်ကြေးမြင်ကြေး ဘာညာသာရကာတွေကို သူ့မှာ အာရုံစိုက်ဖို့အချိန်မရှိဘူး။ သူ သဘောကျနေတဲ့ နတ်ဘုရားမလေးကို အပြင်မှာ သူ ဘယ်လိုတွေ့ရအောင် လုပ်ရမလဲလောက်ပဲ သူ့မှာ အာရုံရှိတယ်။ သူက ငယ်ရွယ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတစ်ယောက်လေ။ တစ်ခါမှ မချစ်ဖူးတာမို့ ချစ်ပြီဆိုလည်း သူ အားသွန်ခွန်စိုက်ကိုပဲ ချစ်တော့တာပေါ့။ သူ့ရဲ့အရာရာကိုပုံအောပြီးတော့။ သူ စိတ်ကူးထားတာ ဒီကောင်မလေးက သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး ဆိုတဲ့အရာအားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ရမယ်။
သူ့ရဲ့ပထမဆုံးလက်ကိုင်မှု၊ ပထမဆုံးပခုံးဖက်မှု၊ ပထမဆုံးခါးဖက်မှု၊ ပထမဆုံးအနမ်း...
ပထမဆုံးတွေတင်မဟုတ်ပါဘူး သူ ကောင်မလေးကို ဒုတိယ၊ တတိယနဲ့ နောင်အကြိမ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်း ပေးဦးမှာပါ။ သူ ဒီလောက်ထိ ဒီကောင်မလေးကို သဘောကျတယ်။
အဲ့ဒီမိန်းကလေးကတော့ အစောပိုင်းသူ့ကို ဝင်တိုက်တဲ့ ကျောင်းသားရဲ့ ဖုန်းမှာနေရာယူထားတဲ့ ကောင်မလေးပါပဲ။ ယွန်းဆိုတဲ့ ID Name နဲ့ ဒီမိန်းကလေးဟာ သူတို့ကောင်လေးတွေကြားမှာ ရေပန်းစားတဲ့ Photo Model တစ်ယောက်ပေါ့။
သူမမှာ နတ်သမီးလေးလို ဖြူစင်တဲ့မျက်နှာလေးရှိတယ်။ သူမရဲ့ မျက်လုံးကြည်ကြည်တောက်တောက်လေးတွေက သူတို့ရဲ့ နှလုံးသားကို ကြည်လင်စေနိုင်တယ်။ သူမရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကွေးညွှတ်သွားရင် သူတို့ ဒူးထောက်ကျမတတ်ပဲ။ သူမရဲ့ သွားညီညီလေးတွေ ပေါ်အောင်ရယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် သူတို့ တတိယကမ္ဘာစစ်ကို စပေးရဲတယ်။ သူမသာ ဒူးထောက်ပါဆိုရင် သူတို့ ဝန်လေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီလောက်တောင်ပဲ ယွန်း ကို သူတို့သဘောကျကြတယ်။
"မင်းတို့တွဲချင်တဲ့ မိန်းကလေးပုံစံမျိုးက ဘယ်လိုမျိုးလဲ" ဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုး မေးလိုက်ရင် သူတို့အတန်းရဲ့ ယောကျာ်းလေး ဆယ်ယောက်မှာ ကိုးယောက်ရဲ့အဖြေက "ယွန်း" လို့ဖြေလိမ့်မယ်။ ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကတော့ သူက ယွန်း ဖြစ်ချင်တာလို့ ပြောမဲ့သူပေါ့။
"အားလုံးထ... ဆရာမကို နှုတ်ဆက်..."
ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းထိုးသံနဲ့အတူ အခန်းတံခါးပွင့်လာပြီး ဆရာနဲ့အတူတူ စာအုပ်တွေအတူသယ်လာတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ခန့်ဝေသော် နောက်ဆုံးတန်းကနေမြင်လိုက်ရတယ်။
မျက်မှန်ဝိုင်း အုန်းမှုတ်ခွက်ကေ၊ အကွက်တွေပါတဲ့ ရှပ်အပွကို ဖရိုဖရဲဝတ်ထားတဲ့ ကောင်လေးက အတန်းရဲ့ ခုံနံပတ်တစ်လည်း ဖြစ်တယ်။ သူတို့လို ကောင်ဆိုးလေးတွေသဘောမကျတဲ့ ပုံမျိုးပေါ့။ ဘယ်ကောင်ကစပြီး စည်းကမ်းသတ်မှတ်လိုက်လဲတော့မသိဘူး။ သူတို့ကို ဟိုက်ပါဂျပိုးလေးတွေက ကြည့်မရသလို လူဆိုးလေးတွေကလည်း ဟိုက်ပါလေးတွေကို ကြည့်မရတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူပြောတွေကြောင့်ရော သူလုပ်ချင်တာလုပ်တာကြောင့်ပါ လူဆိုးလေးဖြစ်နေတဲ့ ခန့်ဝေသော်ကတော့ ဟိုက်ပါကောင်လေးကို ပျော့တိပျော့ဖတ်လေးဆိုပြီး သိပ်ကြည့်မရပါဘူး။
ဟိုက်ပါကောင်လေးနာမည်က ယွန်းချီတဲ့။ ဟုတ်သား ဟိုက်ပါကောင်လေးမှာ သူ့နတ်ဘုရားမလေးရဲ့ နာမည်တစ်လုံး ပါတယ်။ ယောကျာ်းလေးနာမည်ကလည်း ယွန်းချီတဲ့ အံ့သြပ။ ဟိုက်ပါကောင်လေးနဲ့ သူ တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ဖူးတာတော့ ဟိုက်ပါကောင်လေးက အတန်းတစ်ခုလုံးအတွက် Practical စာအုပ်တွေသွားသယ်ပေးတာပါပဲ။ ဗလာစာအုပ်လေး နည်းနည်းလေးကိုတောင် ဒီကောင်လေးက မနိုင်မနင်းနဲ့။ သူ ဝင်ကူဖြစ်လိုက်တယ်။ ခပ်ပျော့ပျော့ကောင်လေးက ခေါင်းကိုပဲ တွင်တွင်ငုံ့နေတော့တယ်။ ဒါကြောင့် သူ ဒီကောင်လေးရဲ့ ရုပ်ကိုတောင် သေချာမမြင်လိုက်ရပါဘူး။
ဘယ်သူ သူ့ကိုကြည့်မှာမို့ သူက အဲ့လောက်တောင် အဖြစ်သည်းနေရတာလဲ။ ခန့်ဝေသော်တွေးပြီး နှုတ်ခမ်းကို မဲ့မိသေးတယ်။ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်က အဲ့လောက်ကြီး ရှက်ပြနေစရာမလိုပါဘူး။ အပိုတွေ။ တကယ်တမ်း ရှက်လို့လှမှာက သူ့နတ်ဘုရားမလေးပဲရှိတယ်။ ဟုတ်တယ်... ယွန်းလေးမှ မဟုတ်ရင် တခြားသူ ဘာလုပ်လုပ်က လှမနေဘူး။ လောကကြီး လှတာဟာ ယွန်းလေးကြောင့်ပဲ။
ခန့်ဝေသော်တစ်ယောက် သူ့ နတ်ဘုရားမလေးအကြောင်းကို တွေးမိပြီး ပြုံးဖြီးဖြီးဖြစ်သွားတယ်။ သူ ယွန်း ကိုသဘောကျတာက အားလုံးသိနေတာမို့ ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပဲ ဖုန်းထဲကနေ ယွန်းပုံတွေကို ထိုင် save နေလိုက်တယ်။ ယွန်းရဲ့ အသစ်တင်ထားတဲ့ပုံတွေက တအားကိုလှနေတာပါပဲ။ တကယ်ပဲ သူ ဒီညတော့ ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်တော့မယ်။ သေချာပေါက်ပဲ!
"ခန့်... မင်းကို ဟိုက်ပါလေးလှမ်းကြည့်နေတယ်..."
ဆရာစာသင်တာကို အာရုံမစိုက်ဘဲ ခန့်ဝေသော် ဖုန်းကြည့်နေရာကနေ သူ့ကို လှမ်းတို့ပြောတဲ့ ဘေးကငနဲသားကြောင့် သူ အရှေ့ကိုကြည့်တော့ သူ့ဘက်ကို လှည့်နေတဲ့ စားပွဲခင်းကွက်ကို ဖက်ရှင်လုပ်ထားတဲ့ ဂျပိုးလေး။ ဘေးကငနဲသား သော်ဇင်ကို ခန့်ဝေသော် စောင်းငန်းငန်းကြည့်တယ်။ ဒီကောင်က ဘယ်လိုများပြောလိုက်တာလဲ။ ဟိုက်ပါလေးက သူ့ကိုကြည့်တယ်? မျက်ခွက်ကို ဆံပင်တွေအုပ်နေတာကြောင့် သူ့ကိုကြည့်နေလား ကြည်မနေလားကို ဘယ်လိုလုပ်ခွဲမှာလဲ?
"ဟော...ဟော... ပြန်လှည့်သွားပြီ... ခန့် မင်းကို သူ ဘာပြောစရာရှိနေလဲမှမသိတာ..."
"ဘယ်သိမှာလဲ ငါ ယွန်းလေးပုံ ကြည့်နေတယ်... ငါ feel ကျဲသွားအောင် အာရုံမနောက်စမ်းပါနဲ့..."
ခန့်ဝေသော် ကြိမ်းပြီးတော့ သူ့ ဖုန်းကိုပဲ သူ ဆက်ကြည့်နေတယ်။ ယွန်းလေးရဲ့ပုံလေးတွေက သူ့ရဲ့ ခဏတာရှုပ်သွားတဲ့ စိတ်ကို ကောင်းကောင်းကြည်လင်စေတာပါပဲ။ သူ တကယ်ပဲ ယွန်းလေးကို သဘောကျတယ်။ ယွန်းလေးက သူ့အတွက်တော့ နံနက်ခင်းအလင်းရောင်လေးလိုပဲ ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ သူ့စိတ်ကို လန်းဆန်းစေတယ်။ ယွန်းလေးဟာ သူ့အပိုင်ပဲ ဖြစ်ရင် ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲ။ ခန့်ဝေသော်တစ်ယောက် သူ့အတွေးနဲ့သူ ကျေနပ်သွားတော့တယ်။ သိပ်မကြာပါဘူး တခြားကောင်တွေလည်း သူ့လိုပဲတွေးလိမ့်မယ်ဆိုတာကို တွေးမိပြီး သူ့စိတ်ထဲ မကျေမချမ်းဖြစ်သွားရပြန်တယ်။
သြော်... သူ့ဘဝကလည်း ဆိုးရှာတာပဲ။ ဟိုက သူရှိမှန်းတောင် မသိတာကို သူက အသည်းအသန် crush နေရရှာတယ်။ သူ့အဖြစ်က မျက်ကန်းအိပ်မက်မက်နေသလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း အိပ်မက်ဆိုတာ တစ်ချိန်ကျရင် တကယ်ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ သူ့ဘက်က သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အိပ်မက်တွေကို လက်မလျှော့ဖို့ပဲလိုတာပါ။ ခန့်ဝေသော် စိတ်ထဲမှာ အခုလိုမျိုးယုံကြည်ထားခဲ့တယ်။ သူ တစ်နေ့ ယွန်းကို အပြင်မှာ မြင်တွေ့ခွင့်ရမယ်။ သေချာပေါက်ကို မြင်တွေ့နိုင်မယ်ဆိုတာပေါ့။
အပိုငျး - ၁ : ကောငျလေးတှကွေားရပေနျးစားတဲ့ ကောငျမလေး။
ဘယျလိုကနစေလဲတော့ မသိပမေဲ့ ကြောငျးသားတှကွေားထဲမှာ ယှနျးဆိုတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျအကွောငျးက နာမညျကွီးနခေဲ့တယျ။
"အာ... ငါ့ရဲ့နတျဘုရားမလေးက တကယျကို ခဈြစရာကောငျးနတောပဲ..."
ဓာတျပုံထဲက ကောငျမလေးတဈယောကျကတော့ လှလှပပပွုံးနလေို့ပေါ့။ ကောငျမလေးက ခုံလေးတဈလုံးပျေါမှာ ထိုငျနပွေီး ခေါငျးမှာပနျးလှလှလေးတဈပှငျ့ပနျထားတယျ။ ဆံပငျညိုညိုကောငျကောကျလေးတှကေ လမှောလှငျ့နခေဲ့ပွီးတော့ သူမရဲ့ ခွထေောကျနားမှာ ခှေးလေးတဈကောငျက ခုနျနခေဲ့တယျ။
နောကျတဈပုံကို ထပျရှလေို့ကျမယျဆိုရငျတော့ ခှေးလေးက ကောငျမလေးလကျထဲကို ရောကျလာပွီးတော့ ကောငျမလေးက မကျြလုံးလေးတှကေို လခွမျးလေးတှလေိုကှေးကှေးလေးဖွဈလောကျတဲ့အထိ ရယျနတောကို တှရေ့လိမျ့မယျ။
"ဟကေ့ောငျတှေ ငါ့ဖုနျးကို ပွနျပေးစမျး!"
အတနျးထဲကကောငျလေးတှေ အျောဟဈနကွေတာကို ကောငျမလေးတခြို့ကတော့ မကွညျသလိုကွညျ့ကွတယျ။ ဘာလို့ဒီကောငျမလေးနဲ့ပတျသကျလာရငျ အကောငျစုတျတှကေ သဲသဲလှုပျမှနျးသူတို့မသိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့လညျး ဒီကောငျစုတျတှေ လုပျခငျြတာလုပျနတောကို သူတို့လညျး ပွောမနခေငျြတော့ဘူး။ ဘာလို့ဆို Photo Model တှဆေိုတာလညျး မှိုလိုပေါကျတဲ့ ခတျေကွီးပဲဟာ။ တဈခြိနျကရြငျ ပြောကျသှားမှာပေါ့။
ကောငျလေးအခြို့ငွငျးခုနျနရေငျးကနေ ဝငျလာသူကို တိုကျမိလာတာကွောငျ့ အနောကျကိုပြာပြာသလဲ လှညျ့ကွညျ့တော့ တဈခေါငျးလုံး နီရဲနပွေီးနားမှာလညျး နားပေါကျပေါငျးမြားစှာနဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျ။ ရုတျတရကျ ကောငျလေးတှအေကုနျလုံး တိတျသှားတော့တယျ။ တိုကျမိလိုကျတဲ့ကောငျလေးကတော့ ခြှေးသီးခြှေးပေါကျတှတေောငျ ကခြငျြလာတယျ။ ဘာလို့ တဈကြောငျးလုံးရဲ့ အော့ကွောလနျ၊ အခွားကြောငျးတှကေလညျး ကွောကျရတဲ့ လူဆိုးကောငျကို သူ ဝငျတိုကျလိုကျရတာလဲ။ သူက အတျောကံဆိုးတာပဲ။
"ခနျ့... ဆော... ဆောရီး..."
မီးလိုရဲရဲတောကျနတေဲ့ ဆံပငျထောငျတှနေဲ့ ကောငျလေးရဲ့ မကျြလုံးတှကေ သူ့ကို ဝငျတိုကျတဲ့ ကောငျလေးရဲ့ လကျထဲကဈြကဈြပါအောငျ ဆုတျထားတဲ့ ဖုနျးကိုရောကျသှားခဲ့တယျ။ ကဈြကဈြပါအောငျဆုတျထားတာကွောငျ့ ဖုနျးကလငျးလာပွီး lock screen wallpaper မှာ ကောငျမလေးတဈယောကျပုံလေးပုံလာတော့တယျ။ ကောငျမလေးတဈယောကျ လကျလေးနှဈခြောငျးထောငျပွီး shoulder off အကြီ င်္၊ ပေါငျလညျလောကျရှိတဲ့ ဘောငျးဘီလေးနဲ့ မကျြလုံးတဈဖကျမှိတျ၊ မကျြလုံးမှိတျတဲ့ဘကျက လကျကို လကျနှဈခြောငျးထောငျထားတဲ့ ပုံလေးပေါ့။
ရဲရဲတောကျနတေဲ့ ဆံပငျထောငျတှနေဲ့ကောငျလေးရဲ့ မကျြလုံးက မဆိုစလောကျလေး ပြော့သှားတာကိုတော့ ဘယျသူမှ မသိလိုကျပါဘူး။ တဒင်ျဂလေး မကျြလုံးတှကေ ခဈြရိပျတှနေဲ့ နူးညံ့သှားပွီး ခကျြခငျြးကို မကျြခုံးတှေ တှနျ့ခြိုးသှားတော့တယျ။ ရပျကွညျ့နတေဲ့ အတနျးထဲက ကောငျလေးတှကေတော့ ရဲရဲတောငျအသကျမရှူရတော့ဘူး။ ကောငျမလေးတှကေတော့ ကောငျလေးတှရေဲ့ ကံဆိုးမှုကို ကွိတျရယျနခေဲ့ကွတယျ။ ကောငျးတယျ ဘယျသူက Photo Model တဈယောကျကွောငျ့ သူတို့ကိုယျသူတို့ မြောကျငပိကိုငျထားသလို ဖွဈနခေိုငျးလို့လဲ။
တောငျးပနျတာကို တဈခှနျးမှမပွောဘဲ သူ ဆောငျ့အောငျ့ဝငျခလြာလိုကျတယျ။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ စိတျထဲမှာတော့ မကမြေလညျဖွဈနသေေးဆဲ။ တဈတနျးလုံးကလညျး ခနျ့ဝသေျောရဲ့အရိပျကိုမွငျတာနဲ့ တိတျဆိတျသှားကွတယျ။ မိနျးကလေးတှကေတော့ သူတို့ရဲ့လုပျနကွေအလုပျတှကေို ဆကျလုပျနကွေတာပေါ့။
ပွောစရာရှိလာတာက ခနျ့ဝသေျောက ကြောငျးရဲ့ လူဆိုးလေးတဈယောကျဖွဈတယျ။ သူ့မှာ မီးတောကျတှလေို ဆံပငျနီနီတှရှေိတယျ။ မကျြလုံးတှစေူးစူးတှရှေိတယျ။ နောကျပွီး သူက ကောငျခြောလေးတဈယောကျပေါ့။ အမြားကွိုကျလောကျတဲ့ ကောငျလေးတော့မဟုတျပမေဲ့ ခပျဆိုးဆိုးကောငျလေးတှကေို သဘောကတြဲ့ကောငျမလေးတှဆေိုရငျတော့ ခနျ့ဝသေျောကို အမှတျပွညျ့ပေးလိမျ့မယျ။ ဒါကတော့ သခြောပေါကျပွီး။ ထပျပွီး... ပွောရမှာကတော့ ခနျ့ဝသေျောက ရုံးခနျးကို ဘယျနှဈခါပဲဝငျရဝငျရ သူ့ဆံပငျအရောငျကို ပွောငျးဖို့ဘယျသူမှ ပွောလို့မရဘူး။ ကြောငျးအုပျကွီးကိုယျတိုငျကပေါ့။ သွျော... ပွောရဦးမယျ... ကြောငျးအုပျကွီးက သူ့ဦးလေးလေ။ ဒီတူလေးတဈယောကျကို ကြောငျးအုပျကလညျး နိုငျပုံမရပါဘူး။
ခနျ့ဝသေျောရဲ့မိဘတှကေ အဝေးမှာနကွေပွီး သူတို့နဲ့ဝေးနတေဲ့သားလေးကို လိုလေးသေးမရှိထားတယျ။ ဦးလေးကြောငျးအုပျရဲ့မိနျးမကလညျး ကလေးမရနိုငျတာကွောငျ့ ခနျ့ဝသေျောကို တုနျနအေောငျခဈြတယျ။ ဦးလေးက ဆူမယျဆိုရငျလညျး ခနျ့ဝသေျောရှကေ့ ကာဆီးကာဆီးနဲ့။ ဒီတော့ ခနျ့ဝသေျောကို ပွောနိုငျတာက တလောကလုံးမှာ ဘုရားပဲ ရှိလိမျ့မယျလို့တောငျ ပွောလို့ရတယျ။ ဒါတောငျ သခြောလှတယျလညျး မဟုတျပါဘူး။
နောကျပွီး ခနျ့ဝသေျောက လူပြိုဖျောဝငျနပွေီမို့ သူ့ရဲ့ ကလနျကဆနျလုပျခငျြတဲ့စရိုကျရယျ၊ ထဈခနဲရှိသှေးဆူလှယျတာက အကငျြ့ကွီးလိုပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ရနျပှဲဟလေို့ ပွောလိုကျရငျ ခနျ့ဝသေျောနဲ့ ဘယျသူနဲ့လဲလို့ပဲ ပွောလိုကျလို့ရတယျ။
ခနျ့ဝသေျောရဲ့ ရနျဖွဈတာတှကေ အကွောငျးမဲ့တော့မဟုတျပွနျဘူး။ သူ လူဆိုးလေးဖွဈတဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေလညျး ခပျမြားမြားတော့ ခပျမြားမြားရယျ။
ဥပမာ သူ လမျးလြှောကျလာမယျ။ ကလေးတှကေ ကွောငျလေးတဈကောငျ၊ ခှေးလေးတဈကောငျကို အနိုငျကငျြ့ပွီး ဆော့နကွေမယျ။ အဲ့ဒါမြိုးဆို သူက ဖွဲခွောကျပွီး ကွောငျလေး၊ခှေးလေးတှကေို ကာကှယျမယျ။
ဟော... မိနျးကလေးတှကေို နှောငျ့ယှကျတဲ့ သူတခြို့နဲ့ကွုံလညျး ခနျ့ဝသေျောက ဝငျကူညီတတျသေးတယျ။ အဲ ကံမကောငျးတာက သူ့ရဲ့ နီနီထောငျထောငျ ဆံပငျတှရေယျ၊ နားမှာ သုံးလေးကှငျးလောကျရှိနတေဲ့ နားကှငျးတှရေယျကွောငျ့ ခှေးလေးကွောငျလေးတှကေလှဲရငျ သူ ကယျတဲ့လူတှကေတော့ သူ့ကို ကြေးဇူးတငျလမေ့ရှိကွဘူး။
အဲ့လိုအကွောငျးအရာကနေ ပလိနျးကွီး သူ ကွညျ့မရတာကွောငျ့ဆိုပွီး ခနျ့ဝသေျောက ထိုးကွိတျခငျြထိုးကွိတျသေးတာ။ တဈခါဆို သူ မကွိုကျတဲ့အရောငျဝတျလာလို့ဆိုပွီး ခနျ့ဝသေျောက ကောငျလေးတဈယောကျကို ထိုးဖူးသေးတယျ။ ဒီလိုတှကွေောငျ့ ခနျ့ဝသေျောက လူဆိုးလေးဆိုတဲ့ သတငျးက ပိုပိုမှေးလာတယျ။
ကူညီတာတှနေဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ခနျ့ဝသေျောကို ကွညျ့ရတာလညျး ဘယျလိုမှ နပေုံမပျေါပါဘူး။ သူ ကူညီခငျြလို့ ကူညီလိုကျတာပဲဟာ။ ကြေးဇူးတငျတယျ မတငျဘူးဆိုတာကို သူ တှေးလညျး မနပေါဘူး။ မကျြစိရှတှေ့လေို့ ကူညီလိုကျတာ။ သူက ဘုရားမဟုတျတာကွောငျ့ မကျြစိရှမေ့တှတေ့ာတှကေို တှေးပူပွီး စိတျလညျးဆငျးရဲမနပေါဘူး။ ဒီတော့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ကူညီတယျဆိုတဲ့ ကိစ်စက သူ့ရှမှေ့ာ ဖွဈနတောကွောငျ့လို့ပဲ ပွောလို့ရတယျ။ လမျးကွုံသူရဲကောငျးလေးလို့ သူ့ကို ကြှနျတျောတို့ ချေါကွမလား?
ဒီလိုနဲ့ ခနျ့ဝသေျောတဈယောကျက ခနျ့မှနျးလို့မရတဲ့ အကွောငျးရငျးတှအေကုနျစုပွီး လူဆိုးဗိုလျလေးဖွဈလာတော့တာပေါ့။ ရနျဖွဈတျောတယျ၊ ကြောငျးအုပျဦးလေးရဲ့အရှိနျရှိတယျ၊ ခကျထနျတဲ့မကျြနှာပေးရှိတယျ။ နောကျပွီး သူ့ကို လူတှထေငျခငျြသလိုထငျ လူတိုငျးရဲ့ အထငျတှကေို လိုကျဖွရှေငျးဖို့ မကွိုးစားဘူး။ ဒီတော့ သူ လူဆိုးဗိုလျတဈယောကျဖွဈမှနျးမသိကိုဖွဈလာတော့တယျ။
ရှယျတူကြောငျးသားလေးတှေ အမွငျမှာတော့ ခနျ့ဝသေျောက အရမျးမိုကျတဲ့ကောငျကလေး၊ ထိကိုမထိရဲတဲ့ ကောငျကလေးဖွဈပွီး၊ သူ့ထကျအတနျးကွီးကြောငျးသားတှေ အမွငျမှာတော့ ခနျ့ဝသေျောက နောကျခံအားကိုးနဲ့ မိုကျနတေဲ့ မိုကျတိမိုကျကနျးတဇှတျထိုးကောငျလေး၊ အတနျးငယျတဲ့ကြောငျးသားတှအေတှကျတော့ အရမျးမိုကျပွီး ဆိုးဖို့ဆိုရငျ Ideal ထားရမဲ့ ပုံစံမြိုးပေါ့။
ခနျ့ဝသေျောကတော့ သူ့ကိုဘယျသူက ဘယျလိုပဲ ထငျနထေငျနေ အဖကျမလုပျပါဘူး။ အရငျကဆိုရငျ နညျးနညျးတော့ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈရပမေဲ့ အခုနောကျပိုငျးတော့ သူ စိတျအနှောငျ့အယှကျ မဖွဈတော့ဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့... ခနျ့ဝသေျောမှာ တိတျတခိုးခဈြရတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျရှိတယျ။ သူ အဲ့ဒီကောငျမလေး အကွောငျးကိုပဲ အခြိနျပွညျ့တှေးနတေတျတယျ။ ဒီတော့ တခွားသူတှရေဲ့ထငျကွေးမွငျကွေး ဘာညာသာရကာတှကေို သူ့မှာ အာရုံစိုကျဖို့အခြိနျမရှိဘူး။ သူ သဘောကနြတေဲ့ နတျဘုရားမလေးကို အပွငျမှာ သူ ဘယျလိုတှရေ့အောငျ လုပျရမလဲလောကျပဲ သူ့မှာ အာရုံရှိတယျ။ သူက ငယျရှယျတဲ့ ဆယျကြျောသကျကောငျလေးတဈယောကျလေ။ တဈခါမှ မခဈြဖူးတာမို့ ခဈြပွီဆိုလညျး သူ အားသှနျခှနျစိုကျကိုပဲ ခဈြတော့တာပေါ့။ သူ့ရဲ့အရာရာကိုပုံအောပွီးတော့။ သူ စိတျကူးထားတာ ဒီကောငျမလေးက သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး ဆိုတဲ့အရာအားလုံးကို ပိုငျဆိုငျရမယျ။
သူ့ရဲ့ပထမဆုံးလကျကိုငျမှု၊ ပထမဆုံးပခုံးဖကျမှု၊ ပထမဆုံးခါးဖကျမှု၊ ပထမဆုံးအနမျး...
ပထမဆုံးတှတေငျမဟုတျပါဘူး သူ ကောငျမလေးကို ဒုတိယ၊ တတိယနဲ့ နောငျအကွိမျတှအေကုနျလုံးကိုလညျး ပေးဦးမှာပါ။ သူ ဒီလောကျထိ ဒီကောငျမလေးကို သဘောကတြယျ။
အဲ့ဒီမိနျးကလေးကတော့ အစောပိုငျးသူ့ကို ဝငျတိုကျတဲ့ ကြောငျးသားရဲ့ ဖုနျးမှာနရောယူထားတဲ့ ကောငျမလေးပါပဲ။ ယှနျးဆိုတဲ့ ID Name နဲ့ ဒီမိနျးကလေးဟာ သူတို့ကောငျလေးတှကွေားမှာ ရပေနျးစားတဲ့ Photo Model တဈယောကျပေါ့။
သူမမှာ နတျသမီးလေးလို ဖွူစငျတဲ့မကျြနှာလေးရှိတယျ။ သူမရဲ့ မကျြလုံးကွညျကွညျတောကျတောကျလေးတှကေ သူတို့ရဲ့ နှလုံးသားကို ကွညျလငျစနေိုငျတယျ။ သူမရဲ့ နှုတျခမျးလေးကှေးညှတျသှားရငျ သူတို့ ဒူးထောကျကမြတတျပဲ။ သူမရဲ့ သှားညီညီလေးတှေ ပျေါအောငျရယျဖို့အတှကျဆိုရငျ သူတို့ တတိယကမ်ဘာစဈကို စပေးရဲတယျ။ သူမသာ ဒူးထောကျပါဆိုရငျ သူတို့ ဝနျလေးမှာ မဟုတျဘူး။ အဲ့ဒီလောကျတောငျပဲ ယှနျး ကို သူတို့သဘောကကြွတယျ။
"မငျးတို့တှဲခငျြတဲ့ မိနျးကလေးပုံစံမြိုးက ဘယျလိုမြိုးလဲ" ဆိုတဲ့မေးခှနျးမြိုး မေးလိုကျရငျ သူတို့အတနျးရဲ့ ယောကျြားလေး ဆယျယောကျမှာ ကိုးယောကျရဲ့အဖွကေ "ယှနျး" လို့ဖွလေိမျ့မယျ။ ကနျြတဲ့တဈယောကျကတော့ သူက ယှနျး ဖွဈခငျြတာလို့ ပွောမဲ့သူပေါ့။
"အားလုံးထ... ဆရာမကို နှုတျဆကျ..."
ကြောငျးတကျခေါငျးလောငျးထိုးသံနဲ့အတူ အခနျးတံခါးပှငျ့လာပွီး ဆရာနဲ့အတူတူ စာအုပျတှအေတူသယျလာတဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျကို ခနျ့ဝသေျော နောကျဆုံးတနျးကနမွေငျလိုကျရတယျ။
မကျြမှနျဝိုငျး အုနျးမှုတျခှကျကေ၊ အကှကျတှပေါတဲ့ ရှပျအပှကို ဖရိုဖရဲဝတျထားတဲ့ ကောငျလေးက အတနျးရဲ့ ခုံနံပတျတဈလညျး ဖွဈတယျ။ သူတို့လို ကောငျဆိုးလေးတှသေဘောမကတြဲ့ ပုံမြိုးပေါ့။ ဘယျကောငျကစပွီး စညျးကမျးသတျမှတျလိုကျလဲတော့မသိဘူး။ သူတို့ကို ဟိုကျပါဂပြိုးလေးတှကေ ကွညျ့မရသလို လူဆိုးလေးတှကေလညျး ဟိုကျပါလေးတှကေို ကွညျ့မရတတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ လူပွောတှကွေောငျ့ရော သူလုပျခငျြတာလုပျတာကွောငျ့ပါ လူဆိုးလေးဖွဈနတေဲ့ ခနျ့ဝသေျောကတော့ ဟိုကျပါကောငျလေးကို ပြော့တိပြော့ဖတျလေးဆိုပွီး သိပျကွညျ့မရပါဘူး။
ဟိုကျပါကောငျလေးနာမညျက ယှနျးခြီတဲ့။ ဟုတျသား ဟိုကျပါကောငျလေးမှာ သူ့နတျဘုရားမလေးရဲ့ နာမညျတဈလုံး ပါတယျ။ ယောကျြားလေးနာမညျကလညျး ယှနျးခြီတဲ့ အံ့သွပ။ ဟိုကျပါကောငျလေးနဲ့ သူ တတေ့ဆေို့ငျဆိုငျတှဖေူ့းတာတော့ ဟိုကျပါကောငျလေးက အတနျးတဈခုလုံးအတှကျ Practical စာအုပျတှသှေားသယျပေးတာပါပဲ။ ဗလာစာအုပျလေး နညျးနညျးလေးကိုတောငျ ဒီကောငျလေးက မနိုငျမနငျးနဲ့။ သူ ဝငျကူဖွဈလိုကျတယျ။ ခပျပြော့ပြော့ကောငျလေးက ခေါငျးကိုပဲ တှငျတှငျငုံ့နတေော့တယျ။ ဒါကွောငျ့ သူ ဒီကောငျလေးရဲ့ ရုပျကိုတောငျ သခြောမမွငျလိုကျရပါဘူး။
ဘယျသူ သူ့ကိုကွညျ့မှာမို့ သူက အဲ့လောကျတောငျ အဖွဈသညျးနရေတာလဲ။ ခနျ့ဝသေျောတှေးပွီး နှုတျခမျးကို မဲ့မိသေးတယျ။ ယောကျြားလေးတဈယောကျက အဲ့လောကျကွီး ရှကျပွနစေရာမလိုပါဘူး။ အပိုတှေ။ တကယျတမျး ရှကျလို့လှမှာက သူ့နတျဘုရားမလေးပဲရှိတယျ။ ဟုတျတယျ... ယှနျးလေးမှ မဟုတျရငျ တခွားသူ ဘာလုပျလုပျက လှမနဘေူး။ လောကကွီး လှတာဟာ ယှနျးလေးကွောငျ့ပဲ။
ခနျ့ဝသေျောတဈယောကျ သူ့ နတျဘုရားမလေးအကွောငျးကို တှေးမိပွီး ပွုံးဖွီးဖွီးဖွဈသှားတယျ။ သူ ယှနျး ကိုသဘောကတြာက အားလုံးသိနတောမို့ ပျေါပျေါတငျတငျပဲ ဖုနျးထဲကနေ ယှနျးပုံတှကေို ထိုငျ save နလေိုကျတယျ။ ယှနျးရဲ့ အသဈတငျထားတဲ့ပုံတှကေ တအားကိုလှနတောပါပဲ။ တကယျပဲ သူ ဒီညတော့ ကောငျးကောငျးအိပျပြျောတော့မယျ။ သခြောပေါကျပဲ!
"ခနျ့... မငျးကို ဟိုကျပါလေးလှမျးကွညျ့နတေယျ..."
ဆရာစာသငျတာကို အာရုံမစိုကျဘဲ ခနျ့ဝသေျော ဖုနျးကွညျ့နရောကနေ သူ့ကို လှမျးတို့ပွောတဲ့ ဘေးကငနဲသားကွောငျ့ သူ အရှကေို့ကွညျ့တော့ သူ့ဘကျကို လှညျ့နတေဲ့ စားပှဲခငျးကှကျကို ဖကျရှငျလုပျထားတဲ့ ဂပြိုးလေး။ ဘေးကငနဲသား သျောဇငျကို ခနျ့ဝသေျော စောငျးငနျးငနျးကွညျ့တယျ။ ဒီကောငျက ဘယျလိုမြားပွောလိုကျတာလဲ။ ဟိုကျပါလေးက သူ့ကိုကွညျ့တယျ? မကျြခှကျကို ဆံပငျတှအေုပျနတောကွောငျ့ သူ့ကိုကွညျ့နလေား ကွညျမနလေားကို ဘယျလိုလုပျခှဲမှာလဲ?
"ဟော...ဟော... ပွနျလှညျ့သှားပွီ... ခနျ့ မငျးကို သူ ဘာပွောစရာရှိနလေဲမှမသိတာ..."
"ဘယျသိမှာလဲ ငါ ယှနျးလေးပုံ ကွညျ့နတေယျ... ငါ feel ကြဲသှားအောငျ အာရုံမနောကျစမျးပါနဲ့..."
ခနျ့ဝသေျော ကွိမျးပွီးတော့ သူ့ ဖုနျးကိုပဲ သူ ဆကျကွညျ့နတေယျ။ ယှနျးလေးရဲ့ပုံလေးတှကေ သူ့ရဲ့ ခဏတာရှုပျသှားတဲ့ စိတျကို ကောငျးကောငျးကွညျလငျစတောပါပဲ။ သူ တကယျပဲ ယှနျးလေးကို သဘောကတြယျ။ ယှနျးလေးက သူ့အတှကျတော့ နံနကျခငျးအလငျးရောငျလေးလိုပဲ ကွညျကွညျလငျလငျနဲ့ သူ့စိတျကို လနျးဆနျးစတေယျ။ ယှနျးလေးဟာ သူ့အပိုငျပဲ ဖွဈရငျ ဘယျလောကျမြားကောငျးလိုကျမလဲ။ ခနျ့ဝသေျောတဈယောကျ သူ့အတှေးနဲ့သူ ကနြေပျသှားတော့တယျ။ သိပျမကွာပါဘူး တခွားကောငျတှလေညျး သူ့လိုပဲတှေးလိမျ့မယျဆိုတာကို တှေးမိပွီး သူ့စိတျထဲ မကမြေခမျြးဖွဈသှားရပွနျတယျ။
သွျော... သူ့ဘဝကလညျး ဆိုးရှာတာပဲ။ ဟိုက သူရှိမှနျးတောငျ မသိတာကို သူက အသညျးအသနျ crush နရေရှာတယျ။ သူ့အဖွဈက မကျြကနျးအိပျမကျမကျနသေလိုပါပဲ။ ဒါပမေဲ့လညျး အိပျမကျဆိုတာ တဈခြိနျကရြငျ တကယျဖွဈနိုငျမှာပါ။ သူ့ဘကျက သူမနဲ့ပတျသကျတဲ့ အိပျမကျတှကေို လကျမလြှော့ဖို့ပဲလိုတာပါ။ ခနျ့ဝသေျော စိတျထဲမှာ အခုလိုမြိုးယုံကွညျထားခဲ့တယျ။ သူ တဈနေ့ ယှနျးကို အပွငျမှာ မွငျတှခှေ့ငျ့ရမယျ။ သခြောပေါကျကို မွငျတှနေို့ငျမယျဆိုတာပေါ့။
Eries 24.11.2019, 10:12 4.9
KimYooHyun 24.11.2019, 09:58 5
MaskMelon 24.11.2019, 02:02 5
Chue (MiKhoon) 23.11.2019, 13:58 5
TintThiriWin 23.11.2019, 10:25 4.6
MeMo227 23.11.2019, 08:44 4.9
RaiseRen 23.11.2019, 07:22 4.9
I love itt 💙💙💙
Myat ThiRi 23.11.2019, 06:26 5
Nyo Lae 23.11.2019, 06:21 5
Love it ArrLuu 😙